काठमाडाैँ । माओवादीमा प्रदेश सभातर्फको समानुपातिकमा केही नेताका आफन्त परेका छन् । प्रदेश ३ बाट खस–आर्य महिला कोटामा झक्कु सुवेदीकी छोरी भावना सुवेदी परेकी छिन् । प्रदेश ३ बाटै प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहालकी श्रीमती सीता अधिकारी खस–आर्य महिला कोटाबाट सूचीमा परेकी छिन् । माओवादीका अर्का नेता दिलीप प्रजापतिकी श्रीमती प्रतिमा श्रेष्ठ जनजाति कोटाबाट समानुपातिक सूचीमा परेकी छिन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
प्रकाशित : आइतबार, पुष १६, २०७४०३:०१
‘आईसीयूमा पुगेको कांग्रेसलाई अब बूढाे डाक्टरले शल्यक्रिया गर्न सक्दैन’ : चन्द्र भण्डारी
सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी एल्जिना खड्का हत्या आशङ्कामा पाँच पक्राउ !
वृषेशचन्द्र लाल भए ‘महामूर्ख’
पश्चिमी वायुका कारण उपत्यका लगायत देशभर वर्षा
दुईवटा कारलाई टिपरले ठक्कर दिँदा कारमा क्षती !
धितोपत्र बजारमा यस साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर नै बढी कारोवार !